Umxholo wakho uyanuka kuba uphoswa zezi zinto | Martech Zone
Umxholo wakho uyanuka kuba uphoswa zezi zinto
Ingxelo yeshishini emva kwengxelo iyaqhubeka nokubonisa inyani yokuba ukubaluleka kwe-hyper kunye nokwenza ubuqu kukungoyena ndoqo ekunyuseni amazinga okuguqula. Ke kutheni ke ngoku abathengisi bomxholo beqhubeka nokubhala i-drivel ngokubanzi efana nokuqhutywa komntu wonke? Phezolo ndenze intetho kwindawo ethile Ibangela umcimbi kwaye ndawubiza:
Iziqulatho Zakho Zomxholo. Ngokuchanekileyo Njengokuba Ubufuna.
Inqaku lam ngomboniso yayingekokuthuka ukubanakho kwabantu ukubhala umxholo; yayikukugxeka ukukwazi kwabo ukwenza bhala umxholo wabaphulaphuli. Sihlala sihlehla sibuyelela kwimixholo yokubhala siyakholwa ibalulekile, kodwa inxibelelana kuphela neqhezu labaphulaphuli bethu bebonke.
Ingxaki yethu kukuba abaphulaphuli bethu bahlukile. Amathemba amabini anabantu abafanayo aya kuba neenkqubo ezininzi ezahlukeneyo zokuqhubela phambili ubudlelwane nenkampani yakho. Asikhathaleli ukuyithathela ingqalelo.
Izinto ezi-5 zokuphucula umxholo wakho
Yandisa ukuqonda -Ngokongeza imifanekiso, iaudiyo, okanye ividiyo uya kuyonyusa ifuthe kunye nokuqonda kwenqaku olibhalayo.
Yenza yabelane -Ukunyusa umxholo ukuba wakhe ixabiso labafundi ukuba babelana ngalo liqhinga elimangalisayo. Nceda abafundi bakhulise uthungelwano lwabo, bancede abafundi bakhuthaze ubuni babo, bancede abafundi ukuba bathathe inxaxheba ekwabelaneni ngomxholo kuluntu lwabo, okanye babazise ngesizathu abaya kuthi babelane ngaso kuba bayakhathala.
Izigqibo zenkxaso Abanye abafundi bachukunyiswa kukuthenjwa, iinyani, ukusebenza ngokukuko, iimvakalelo zokudityaniswa koko. Umxholo olungelelanisiweyo onazo zonke ezi zinto ziya kudibana nabafundi abaninzi.
Ukunyusa isenzo -Bandakanya umxholo oqhuba ku kholisa Ukuqhagamshela, ukuphindaphinda, ukuvumelana, ukunqongophala, ukungqinelana, kunye negunya.
Yenza -Abantu ababujiki babucime ubomi babo xa befika okanye bephuma emsebenzini. Ukuthengwa kweshishini kuphenjelelwa ngabahlobo, usapho, kunye nophuhliso lwethu. Ukuthengwa kobuqu kuchaphazeleka ngumsebenzi wakho. Ukuthengwa kwemoto, umzekelo, kunokuchaphazeleka kukukhathazeka ngeemayile zerhasi kuhambo olude.
Kwimeko apho, senze uphononongo nenkampani ye-e-commerce izolo. Banokugcinwa okumangalisayo kwabathengi kunye namazinga aphezulu okuguqula, kodwa ekuhambeni kwexesha babenexesha elinzima lokufumana abathengi abatsha. Xa sincokola nabo, into yokuqala abasixelele yona yindlela eyahlukileyo ngayo inkampani yabo. Babengama-100% esekwe eMelika. Uninzi lweemveliso zazo zazenziwe ngamaMelika (ezinye izithako zazingafumaneki apha). Baphendula iifowuni zabo kuwo wonke umnxeba. Kwaye bakha indawo yabo yokugcina izinto nge-100% ngamandla elanga!
Ndiyaqonda ukuba le yimeko ecekeceke, kodwa yonke into ababezingca ngayo malunga nenkampani yabo yayinzima okanye kwakunzima ukuyifumana kwiwebhusayithi yabo! Kuthekani ukuba siguqula umxholo wabo ngoku kulandelayo:
Yongeza i umfanekiso Kweli ziko ukubanefuthe kubatyeleli bakufika nje kwisiza.
Yabelana nge iindaba ekufumaneni inkululeko yamandla. Uxanduva kwezentlalo nakwezendalo esingunobangela wokuba abafundi abaninzi babelane.
Bandakanya iinyani zeshishini, infographics, amaphepha emhlophe, ubungqina, kunye nezifundo zamatyala ukunceda ukuxhasa iindwendwe ' izinqumo.
Umthengi sele enakho ukuhanjiswa simahla kunye nokunikezelwa kwesaphulelo. Mhlawumbi ukongeza umhla wokuphelelwa unokweyisela umntu ngokwenza isithembiso kunqongophala.
Aba bantu babenomdla! Kutheni ungabandakanyi iividiyo ezigcinwe kwimbali yenkampani, inkonzo emangalisayo yabathengi, kunye nezinye iiprofayili ezizodwa zabasebenzi? Ukuqhagamshela Ngokwabo nabaphulaphuli uya ukuqhuba uguquko.
Kwakhona, into okholelwa ukuba ibalulekile kwimveliso okanye kwinkonzo ayisiyiyo le nto umthengi akholelwa ukuba ibalulekile. Iarhente yethu ijolise kuguquko. Kodwa ngamanye amaxesha abathengi banomdla ngakumbi kumgangatho womxholo esiwunikayo. Yinto ekufuneka siyigcinile engqondweni njengoko sibhala umxholo okhuthaza inkampani yethu!
tags: ukuqondaukwenza isigqiboNgokwezifisoku kholisaukwabiwa
Ukufumana ubuqu kwiLizwe elixineneyo